Moya China SAG/AG/Ball/Rod Milling Rubber Liners factory and supplies |Arex
Ilayini yerabha ngokuthe ngcembe ithatha indawo yentsimbi yemanganese.Inokuthwala impembelelo enamandla yokuxhathisa.Imveliso yeesekethe zakho zokusila ixhomekeke kakhulu kwilayini yerabha yokusila.Khetha ekunene kumboneleli wakho welayini yerabha ngononophelo uya kuqinisekisa ukuba inkqubo yakho yokusila iqhuba ngomthamo omkhulu kunye nokufumaneka.
Iilayini zerabha ngokuqhelekileyo zilungele ukugaya okumanzi, ubushushu abukho ngaphezu kwama-80 degrees omsebenzi oqhelekileyo, kodwa kubushushu obuphezulu bokusila okomileyo, ukuxhathisa okuqinileyo kwe-asidi kunye ne-alkali, ukuxhathisa kweoli kunye nokunye okusingqongileyo okukhethekileyo, kufuneka kuchazwe kwangaphambili ngokwahlukeneyo. ifomula yoyilo kunye nesiko elenziwe, ukongeza, inkqubo yokugcina kufuneka ibekwe kwindawo yogcino olufanelekileyo lwangaphakathi, inenjongo yokuba iirabha zeerabha zithintele ukuvezwa kwangaphandle phantsi kobushushu obuphezulu kunye nemvula.
Ngokwenjongo, iilayini zerabha zahlulwe zisetyenziswa: AG, SAG, ibhola, ingqalutye, rod & batch mills, FGD, SMD kunye neemill eziqhubekayo.
Ngokwemilo, yahlulwe ngohlobo lokuphuphuma, uhlobo lwegridi kunye nodidi lwe-multi-bin, olunokuthi luhlangabezane neemfuno zenqanaba elinye lokugaya kunye nezigaba ezimbini zokugaya.
Siyakwazi ukwenza ngokwezifiso zonke iintlobo zeelayini zerabha ezikumgangatho ophezulu kunye nomgangatho ophezulu wokunxiba ngokweemfuno zomthengi ngamnye.
1. Ukusetyenziswa kwamandla aphantsi
2. Ukumelana nokunxiba okuphezulu
3. Ukugcinwa okuphantsi
4. Ukuchasa impembelelo
5. Ingxolo ephantsi
6. Kulula ukuyifaka
7. Ukumelana nomhlwa
8. Ukugcinwa kweebhola zentsimbi
① IiBha zokunyusela
Iibhari zokuPhakamisa zifumaneka kuluhlu lobubanzi, ubude kunye neerabha okanye iiprofayili ezidibeneyo.Iibhari zokuPhakamisa ezibandakanya ukufaka intsimbi zenzelwe ukubonelela ngempembelelo ephezulu kunye nokuxhatshazwa kwe-abrasion.
② Ukuzaliswa kunye namaCandelo eKona
Ukuzaliswa kunye neeSegment zeKona zenzelwe ukukhiya iiPleti zeNtloko kunye ne-Grate Plates kwindawo kunye nokuyeka ukugijima kwezinto kwiikona.
③ Amacwecwe entloko
Iipleyiti zentloko yeRubber ziyafumaneka kwiindlela ezahlukeneyo zokulwa ne-sliding abrasion.IiPlati zeNtloko zenzelwe ukuququzelela ukukhululeka kokufakela kunye nokuphatha
④ Iipleyiti zeGrate
Heavy- duty Grate Plates uyilo ziyafumaneka kwizingqusho ezinkulu.Ipropathi enwebekayo yerabha ivumela iindawo zokubeka iindawo ezincinci kuneegridi zentsimbi ngelixa isusa iingxaki ezingaboniyo.Ifumaneka kuluhlu lweesayizi zokuvula.
⑤ Iicones zeZiko kunye ne-Trunnion & Bell Mouth Liners
IiConnes zaseziko zinokuyilwa ngokwamacandelo ukuze kube lula ukufakela.
Trunnion & Bell Mouth Liners
Ii-Trunnion Liners zenziwe ngesiseko sentsimbi eyenziweyo, ezithi ke zifakwe irabha.Iilayini zerabha ezishiyekileyo zisetyenziswa kwiTrunnion enkulu kunye neBell Mouth linings.
⑥ Iziphakamisi zePulp zangaphandle
⑦ Iziphakamisi zePulp zangaphakathi
Iziphakamisi ze-Pulp ezinerabha ziyilelwe ukunika ukukhutshelwa okuchanekileyo kwe-pulp kwindawo yokusila ukuze kuncitshiswe iibhotile.
⑧ Iipleyiti zeShell
Ubunzima beepleyiti zeqokobhe bunokwahluka ukwenzela ukwandisa umthamo wokugaya kunye / okanye ubomi bomgca.Ububanzi benzelwe ukhuseleko oluphezulu ukusuka kwimivalo yokuphakamisa.
Isalathiso sezinto eziphathekayo
Ukusebenza Iyunithi Isalathiso
Ukuqhawula amandla MPa≥ 18
Ukwandisa ngexesha lekhefu %≥ 420
I-300% yoxinzelelo rhoqo MPa≥ 12
Ukuqina Unxweme A(isidanga) 64-68
I-Akron abrasion cm³/1.61km 0.1
Ukunwebeka kwempembelelo %≥ 45
Ukukrazula deformation esisigxina %≥ 10
Ukunamathela kwerabha kunye nentsimbi KN/m 6
Yonke imihla yeyomgangatho oqhelekileyo kwaye uqhagamshelane nefektri ukufumana ulungelelwaniso olukhethekileyo.
Ngaphambili: Inkqubo yokuHlola yePolyurethane
Okulandelayo: Izahlulo zempompo ze-LR eziludaka
Irabha mat Yokulahla uMzimba weHaul Truck
Metallic Ukwandiswa Joints & Bellows
© Copyright 20102021 : Onke Amalungelo Agciniwe.> Ivalufa yokulawula umoya Metallic Ukwandiswa Joint ISeismic Expansion Joint 50mm Flexible Rubber Hose Isilayidi seValve yesibaso Umnatha wesikrini Zonke iimveliso